China idolo ukugoqa nge ice pack ifektri abakhiqizi | UHuanyi
UKUKHULULEKA KWEZINYO ZAMADOLO: Kubhekiswe ngaphambili nangemuva kwamadolo ngokucindezela okulungisekayo nokwelashwa okushisayo noma okubandayo, umklamo wamadolo obandayo weqhwa kunciphisa ngempumelelo ukuvuvukala, ubuhlungu nokuvuvukala ngenxa yokukhathala kwemisipha, ukulimala noma ukuhlinzwa. I-soft brace brace iphinde inikeze ukukhululeka okunethezekile kwezinhlungu nezinkinga, i-ACL, isifo samathambo, ukulimala kwezemidlalo, ukuhlinzwa nokuningi.
INDLELA YOKUSHISA OKUSHISA NOMA EBANDAYO Kufaka phakathi amaphakethe e-gel asuswayo okwelashwa okushisayo noma okubandayo. Iphakethe ngalinye lingena kalula ephaketheni. Amaphakethe e-gel angenabuthi ayasebenziseka futhi, avuza futhi awunalo i-latex.
UKUKHULULEKA KWEZINYO ZAMADOLO:Kubhekiswe ngaphambili nangemuva kwamadolo ngokucindezela okulungisekayo nokwelashwa okushisayo noma okubandayo, umklamo wamadolo obandayo weqhwa kunciphisa ngempumelelo ukuvuvukala, ubuhlungu nokuvuvukala ngenxa yokukhathala kwemisipha, ukulimala noma ukuhlinzwa. I-soft brace brace iphinde inikeze ukukhululeka okunethezekile kwezinhlungu nezinkinga, i-ACL, isifo samathambo, ukulimala kwezemidlalo, ukuhlinzwa nokuningi.
INDLELA YOKUSHISA OKUSHISA NOMA EBANDAYOKufaka phakathi amaphakethe e-gel asuswayo okwelashwa okushisayo noma okubandayo. Iphakethe ngalinye lingena kalula ephaketheni. Amaphakethe e-gel angenabuthi ayasebenziseka futhi, avuza futhi awunalo i-latex.
1.10 Iminyaka Okuhlangenwe nakho kwe-OEM, ODM. Singakwazi ukwenza ngokwezifiso umumo, ibhande, ilogo, iphakethe njll, kungakunika iziphakamiso zochwepheshe futhi kuthuthukise isixazululo esihle somkhiqizo wakho.
4.Kulabo abagoqa ngamadolo nge-ice pack, iqakala, isihlakala, inkonyane, okhalweni, unyawo, iphakethe leqhwa lehlombe, imboni yethu inamasayizi ahlukile nokuma kokukhetha kwakho, kunganela abantu abaningi.
I-ertificate ye-5.Factory: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI
Langaphambilini hot and abandayo gel pack
Olandelayo: Izingane ice pack
Kuhle Knee Ice Pack
Ukugoqwa Kwamadolo Okubandayo
Ukugoqwa Okushisayo Kwamadolo Okubandayo
Isikhwama Seqhwa Samadolo
Ice umkaki Ukuze Amadolo
Ukugoqwa Kweqhwa Kwamadolo
Amadolo Cold Pack
Iphakethe leGel Gel
Ukugoqwa Kwamadolo Nge-Ice Pack